Wararkii Ugu Danbeeyay Qarax Ka Dhacay Magaalada Boorama Iyo Dhimashada Hal Qof | <<<GIRIYAADNEWS<<<<
Wararkii Ugu Danbeeyay Qarax Ka Dhacay Magaalada Boorama Iyo Dhimashada Hal Qof
Boorama-(giriyaadnews) Qarax ka dhacay xaafada sheekh makaahiil ee galbeedka magaalada ayaa sababay dhimashada qof haweenay ay oo xiligaas ku sugnayd goobta uu qaraxaasi ka dhacay, qaraxan oo aan ilaa iminka aan la garan sababta rasmiga ah ayaa dhacay xili hore oo maalintii Axada.
Haweenaydan ku dhimatay qaraxan ayaa xiligaas ku jirtay hawlmaalmeedkeedii caadiga ahaa ee ay ku nadiifinaysay gurigeeda horteeda ,sida ay wararku sheegayaan qashin gurigeeda horyaalay oo ay gubtay ayuu qaraxaasi ka dhacay dabadeed waxaa madaxa ka galay waxaan la garanayn oo markii danbe loo maleeyay in ay ahayd rasaas.
Ka dib waxaa loola cararay dhakhtarka iyo saldhiga dhexe qaybteeda dhaawac muujinta halkaas oo ay marxuumadu ku geeriyootay.
Si kastaba ha ahaatee qaraxan dhimadashada sababay ayaa ah kii ugu horeeyay noociisa oo kale oo ka dhaca mudooyinkii u danbeeyay magaalada , taas oo dadbadan ay rumaysan yihiin in qaraxani ahaa rasaas ku jirtay qashinka ay haweenaydani gubaysay , ka dibna sidaas uu ku dhashay oo qumicii rasaastuna sidaas madaxii ku galay.
« Wasiir Xaabsade Oo Shir Jaraa’id Qubtay Magaalada Boorama Arimo Badana Ka Hadlay+Sawiro+VIDEO sidee looga ciiday dalka masar halkani ka daawo warbixin xiiso badan »